Sidee Bilaabashadu Ugu Camiraan Bilaabistooda Ugaarsiga Alaabta | Martech Zone
Nidaamka daahfurka ee bilowga shirkad kasta waa mid caalami ah: la imaado fikrad aad u fiican, sameyso qaab demo ah si aad u muujisid, soo jiidato maalgashadayaasha qaar ka dibna faa'iido u yeelatid marba haddii aad suuqa ku garaacdo alaab dhameystiran. Dabcan, sida ay warshaduhu isu beddeleen, ayay aaladuhuba u leeyihiin. Ujeeddo kasta oo jiil ah ayaa ah in daaha laga rogo hab cusub oo lagu bilaabi karo indhaha bulshada.
Xilliyadii hore waxay ku tiirsanaayeen iibiyeyaasha albaab-ka-albaab, boostada iyo xayeysiinta TV-ga iyo raadiyaha si ay u soo saaraan wax soo saar. In kasta oo qaar ka mid ah aaladahaas ay weli maanta taagan yihiin, qallooc casri ah ayaa gebi ahaanba loo baahan yahay si bilowga maanta ay u goostaan ​​meel suuq mashquul ah.
Wareysi lala yeeshay Groove's Alex Turnbull, aasaasaha Product Hunt iyo agaasimaha guud Ryan Hoover wuxuu sharraxay falsafadiisa, wuxuu ka soo maray aabihiis: God raadso, oo buuxi
Hoover wuxuu helay dalool weyn wuxuuna la yimid qaab lagu buuxiyo. Goob kulan oo loogu talagalay kuwa leh bilowga mustaqbalka, degelku wuxuu ku tiirsan yahay ereyga afka si loo xoojiyo ama loo wiiqo kiisaska shaqsiga iyadoo loo marayo kor ama hoos u dhac ku yimid isticmaalayaasha. Haddii aad ka heli karto cod bixinno kugu filan si aad uga guurto quudinta soo socota, halkaasoo ay dhammaan bilowgu ka bilaabmaan, waxaad u gudbeysaa bogga hore ee bogga iyo quudinta muuqaalada leh.
Noocyada kala duwan ee alaabooyinka la bixiyo ayaa ku yaal meel kasta. Farsamooyinka ayaa ku raaxeysan doona telefoonka iyo barnaamijyada moobiilka, halka buugaag iyo waxyaabo kaleba loo heli karo tixgelin. Xitaa waa halkee Ku rar markhaati Cadowgaaga bilaabay sidoo kale. 24 saacadood gudahood markii websaydhku bilaabmay oo garaacaya warbaahinta bulshada, xiisaha ayaa ku qasbay abuuraha inuu dhigo websaydhka ilaa iib ah.
Boggu wuxuu doorbidaa inuu soo bandhigo bilowga 'cusub' - maahan oo kaliya dadaalada ka imanaya kuwa ugu horreeya ee horumariya, laakiin walxaha si aad ah looga cusbooneysiiyay shirkadaha caanka ah. Waxay sidoo kale u oggolaadaan abuurayaasha waxyaabo aan caan ku ahayn inay soo dhigaan bilowgooda, in kasta oo sheyku uusan farsamo ahaan ku cusbeyn.
Barnaamijyada dib loo habeeyay waxay kaloo u qalmi karaan in lagu qoro. Haddii aad ka badan tahay qoraa, markaa Hunt Hunt ayaa laga yaabaa inaanay kuu ahayn, maadaama degelku aanu aqbalin maqaallada iyo qoraalada maqaalka. Adeegyada qandaraaska sidoo kale lagama aqbalo goobta.
Waxaa la caddeeyay inay si qurux badan u guuleysatay, iyadoo ku dhow Taageerayaasha 170,000 on Facebook iyo Twitter illaa bishii May ee la soo dhaafay iyo sideed muuqaal oo Twitter ah.
Weli waxaad dareemeysaa culeys? Waxaan haynaa talooyin si aan u hubino in khibradaada Hunt ee alaabtu ay tahay mid weyn:
Raadi Waxyaabo la mid ah
Tani waa ka-boodka tallaabada ugu horreysa ka hor inta aan la qorsheynin wax bilow ah oo ku saabsan Hunt Hubka, gaar ahaan haddii aad tahay boodhadh rookie ah. Qaadashada waqti si aad u baarto oo aad u ogaato sida shirkadaha kale iyo shakhsiyaadka ay shaqadooda ugu suuq geyn jireen, illaa laga gaarayo taglines-ka, waa bar bilow muhiim ah. U fiirso ereyadaas qabashada ah, laakiin ha iloobin sida ay u abuureen bogagga degitaankooda. Cunsur walba waa in la tixgeliyaa ka hor intaadan boodin, sida naftaada oo kale oo aad u tuuraysid halkaas ayaa ku dhammaan doonta musiibo Caqli yeelo.
Markii ay shirkaddaydu isku dayday inay ku soo bandhigto Hunt Hubka waxaan ahayn qiyaastii 4-sano jir waana aasaasnay. Waxaan isku daynay intii ugu wanaagsaneyd inaan ku barinno isticmaaleyaasha moobiilkeena DIY dhismaha app wuxuu ahaa adeeg aad u wanaagsan laakiin ugubnimadiisa oo aan ahayn wax gebi ahaanba hormuud noo ah oo aan innagu lahayn daah-furnaan guuleysatay. Marka, qodobka muhiimka ah halkan, waa inaad hubisaa inaad bilaabeysid wax cusub oo aan ahayn wax horeyba loogu dhejiyay Hunt Product ka hor taas oo aan lahayn natiijooyin wanaagsan.
Way fiicantahay inaad wax ka barato qaladaadkaaga. Way fiicantahay in laga barto qaladaadka dadka kale. Warren Buffett
Jid kale oo loogu talagalay guusha bogga internetka ayaa raadineysa saameyn - dadka ka bixi kara xiisaha bilowga cusub ee hadda lagu dhajiyay barta. Waa heer u ah kuwa ku xiran shirkad riixaysa bilow si ay emayl ugu diraan shaqaalahooda iyaga oo ku riyaaqaya iyaga oo ujeedkoodu yahay kor u qaadista wax soo saarka cusub. Shakhsiyaadka, way fiicantahay in si lamid ah lala sameeyo xubnaha qoyska iyo asxaabta. (Xitaa haddii habaryartaa aysan hanan e-mayl. Cod kasta waa la tiriyaa, xusuusnow.)
Waxaa jira xuduudo, si kastaba ha noqotee. Ugaarsiga Alaabtu uma ogolaanayo shirkadaha inay si fudud boos uga iibsadaan bogga hoyga. Macno malahan sida laga cabsado diiwaanka raadraaca, wali waa inay kasbadaan darajo sare iyada oo loo marayo kor u qaadista sida qof kasta oo kale.
Xawaare Ku Hay Maskaxda Marka Aad Wax U Abuureyso Goobta
Si ka duwan websaydhada la midka ah, algorithm Product Hunt waxay kuxirantahay xawaaraha. Isla marka saacadda goobta ay soo gaarto saqda dhexe PST, maalinta cusub ayaa bilaabmaysa waxaana la nadiifinayaa kuwa maalinlaha ah ee cod-bixiyeyaasha ugu sarreeya maalinti hore. Marka, waxay muhiim u tahay kuwa horumariyayaashan inay hubiyaan in wax walba la dejiyey lana diyaariyey mar haddii sheyga la dhajiyo oo aad ku jirto naxariista isticmaaleyaasha. Maaddaama Ugaarsiga Badeecaddu uusan oggolaanayn dib-u-dhigis kiisaska qaarkood mooyee (kor ku xusan), in maalin maalmaha ka mid ah ay go'aamiso in bilowgaagu guuleysto ama guuldareysto.
Faallooyinka isticmaalaha ayaa loo adeegsan karaa faa iidadaada
Soosaarayaasha casriga ah iyo nashqadeeyayaasha ayaa adeegsada dib u eegista si ay u xoojiyaan sheyga. Naqshadayaashu waxay u sheegeen sheekooyin ku saabsan sida beta beta ee barnaamijkooda taleefanka loo hagaajiyay iyagoo akhrinaya faallooyinka goobta iyo hagaajinta cayayaanka. Bogga Su'aalaha ee Hunt Product ayaa ku adkaysanaya in barnaamijka dib loo qori karo oo keliya haddii cusboonaysiinta 'wax ku ool' ay yihiin - muhiimad ahaanna muhiimad u leh qaabab cusub halkii aad ka beddeli lahayd halkan ama halkaas. Maamulayaasha bulshada ayaa diidi doona waxyaabaha cusub ee la cusbooneysiiyay, markaa maskaxda ku hay taas.
Tusaalooyinka astaamaha la aqbalay waxay ka shaqeeyaan wadajirka ballaadhinta illaa helitaanka sii kordhaya ee dhufto ee kala duwan, laga yaabee nooc cusub oo mobiil ah oo degel ah. Xitaa astaan ​​cusub ayaa tirinaysa!
Kaliya fiiri Minibox. Barnaamijka fayl-wadaagga ayaa hadda laba sano laga joogaa soo-celintiisii ​​saddexaad, iyadoo noocyo badan oo loogu talagalay dhufto ee kala duwan ka dib markii la bilaabay sidii madal Mac-keliya ah.
Waqtigaaga si toos ah u bilow hawshaada
Maamulayaasha websaydhadu waxay hubin doonaan inay si sax ah u diyaarsadaan sheyga bilowgiisa. Sheekooyinka naxdinta leh ee bilowga ah ee aan loo diyaargaroobin kororka taraafikada sababtoo ah dhajinta alaabada ugaarsiga waa wax caadi ah, sida soosaaraha Ship Your Enemies Glitter's oo ay la socoto dan guud.
Hubso in markaad qorsheyneyso inaad wax bilowdo, wax walba ay u dejiyaan sida aad u jeceshahay. Haddii aadan diyaar u ahayn oo aad noqon lahayd isticmaaleyaasha dhibaato ka haysato barnaamijka, u diyaar garow cododyo badan oo hoos u dhigaya oo tilmaamaya cayayaanka iyo xajinta bidix iyo midig. Markaa qaddarka barnaamijka wuxuu ku jiri doonaa gacanta maareeyayaasha bulshada ee bogga markaad email ugu dirto iyaga oo wata nooc la hagaajiyay.
Maareeyayaashu waxay u baahan yihiin inay wax uun ka ogaadaan wax kasta oo aad qorshaysay ee Nooca 2.0 ah si ay u oggolaadaan in dib loo qoro. Hubso inaad diyaarisay tusaalooyin.
Ha Kalinimadaada Ha Ula Tagin Adigoon La Xiriirin Warbaahinta
Halyeeyayaasha Hunt Huntada adeegsadayaashu way yaqaanaan bilaabista bilaabista, waxayna leeyihiin xiriiro dhanka warbaahinta ah oo ka caawiya xayeysiinta. Taas macnaheedu maaha inaadan kudayan karin. Ma garaneysaa wax boggaga internetka ama saxafiyiinta wax ka qoray badeecadaadii hore adiga oo leh dib u eegis wanaagsan? Samee emayl si aad uhesho dareenkooda ku saabsan bilaabista cusub oo u dir iyaga maalinta la bilaabayo.
Fariimaha xitaa waa la otomaatikari karaa si waqti yar looga ilaaliyo waxa ay noqon laheyd maalin mashquul badan. Waa hab fudud oo lagu heli karo bilowgaaga cusub hortiisa kubbado badan oo indhaha ah oo leh dabool aad u weyn, oo aad ku heli karto kor u qaadis intaas ka badan.
Fikirka & Waanada
In tan oo dhan maskaxda lagu hayo waa wax badan oo laga fiirsado qof walba, iskaba daa badeecada ugaarsiga alaabta. Haddii aad diyaar tahay, wax ka qabashada wax kasta oo isticmaaleyaashu kugu tuuraan waa shay. Ma lagu qasbay in dib loo qoro ka dib markii la bilaabay weyn haywire? Dhib ma leh, aan u sii gudbino cusbooneysiinta maareeyaha bulshada. Diyaar ma u ahayn xiisaha ka weyn wixii la filayay? Cashar la bartay waqtiga soo socda. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala caqliga waxay wax ka bartaan hiccups iyo qaladaadka si ay uga fiicnaadaan waqtiga soo socda. Waxaa mudan dadaal.
Tusaalooyinkaas, kuwa wanaagsan iyo kuwa xunba, waxay muujinayaan sida ay awood ugu yeelan karto Ugaarsiga Badeecaddu. Soo-saare kasta oo doonaya inuu bilaabo ganacsi wuxuu ku fiicnaan lahaa inuu eego qiimaha ay bixiso goobta. Soosaarid alaab fudud ayaa noqon karta gunta guusha shirkadda. Haddii aad diyaar u tahay oo aad diyaar u tahay inaad tagto, faa'iidooyinka Hunt Product waa adiga oo ku raaxeysta. Nasiib wanaagsan!
Tags: dhismaha appDaahfurkasanduuqaugaarsiga alaabtaBilawga wax soo saarkaugaarsixawaaladahadallacsiinta
Andrew Gazdecki waa aasaasaha iyo agaasimaha guud Barnaamijyada Caajiska - ka dhigista barnaamijyada moobiilku kuwa la awoodi karo oo u fudud ganacsiyada yaryar. Waxaan nahay wax-is-u-samee iPhone, iPad, Android & HTML5 barnaamij u oggolaanaya ganacsi kasta oo yar inuu isku mar abuuro, wax ka beddelo, oo maamulo barnaamijyada moobiilka iyada oo aan loo baahnayn aqoon barnaamij.
Martech Zone: Kusoo Dhawaada Daabacaaddayda Cusub ee Martech!